Ngowe-1843 iLifa leMveli lidweliswe kwi-Cottage Willunga/Mclaren Vale - I-Airbnb
Ngowe-1843 iLifa leMveli lidweliswe kwi-Cottage Willunga/Mclaren Vale
Ngo-1843, indawo yokuhlala yabahlali baseIreland ebhalwe kwiLifa leMveli, iindawo zokutyela zasekhaya, iivenkile kunye neemarike. Awunyanzelekanga ukuba uhambe umgama omde ukonwabela uyolo oluninzi lwale lali yeMarike. 80 Wineries ngaphakathi 15 imizuzu drive.
Iilwandle ezi-9 ngaphakathi kwe-12 min drive
Imizuzu emi-4 ukuhamba ukuya kwiindawo ezi-3 zembali zalapha ekhaya, iindawo ezi-2 zokuthengisa utywala, iindawo zokungcamla iwayini, iikhefi kunye neevenkile.
Imarike yemveliso yaseWillunga edumileyo, rhoqo ngeMigqibelo.
Imizuzu engama-30 ukuya eGlenelg.
I-30 min drive ukuya eVictor Harbour, eGoolwa okanye ePort Elliot.
Imizuzu engama-40 ukuya eKangaroo Island.
Isanda kulungiswa kwaye ilungele ukuhamba. Dibana noluntu kwiindawo zokutyela, iivenkile kunye neemarike ngexesha lotyelelo lwakho.
Iziko lelali kukuhamba nje kwemizuzu emi-4 kunye neehotele ezi-3 zelifa lemveli, ezi-2 zokuthengisa utywala, iikhefi kunye neevenkile. Ukuziva okukhululekileyo kwe-cottage kunendawo eninzi kubandakanya ikhitshi lexesha kunye ne-aga yayo yamafutha amabini kunye netafile yelizwe. Indawo yokuphumla yeyona ndawo ifanelekileyo yokukhaba emva kwaye uphumle emva kosuku olude elunxwemeni, okanye ii-wineries ukuba ujonge indawo yokugoba. Kungenjalo, phumla kwibhedi ye-bali ngemibono emangalisayo ukuya elwandle, ecaleni kweMithi yeGum eneminyaka engama-400 ubudala.
Ipropati ibandakanya i-Flat-Screen TV (kunye ne-Netflix) kunye ne-WIFI epheleleyo engenazintambo.
I-Fleurier Peninsula ebandakanya ii-80+ ezaziwayo zeMcLaren Vale Wineries kunye neeresityu zilinde ukuba uzifumane. Amanzi afurquoise kunxweme oluninzi lwendawo yi-hop encinci esuka eVictor Harbour, Goolwa, Port Elliot, Kangaroo Island okanye nakwiSixeko.
Iilwandle ezi-9 ngaphakathi kwe-12 min drive, i-Sellicks, i-Aldinga, i-Port Willunga, i-Maslin, i-Moana, i-Seaford, i-Southport, i-Port Noarlunga, i-Christies.
Imarike yemveliso yaseWillunga edumileyo, rhoqo ngeMigqibelo. 80 Wineries ngaphakathi 15 imizuzu drive.
Ifumaneka ngeSMS ngexesha lokuhlala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Willunga